नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो –के छ प्रतिवेदनमा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो –के छ प्रतिवेदनमा ?
नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो –के छ प्रतिवेदनमा ?
भदौ ६ गते, २०७७ - १७:३५
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विवाद समाधान गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले १ साता लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन बुझेका छन् ।
ओेलीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाका अनुसार अध्यक्षद्वय अ‍ोली-प्रचण्डले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन बुझेका हुन् ।
शनिबार झण्डै ८ घण्टा बैठक बसेर अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदन कार्यदलले शनिबारै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बालुवाटारमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
गत साउन ३० गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नेताहरू डा. भीम रावल, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
भदौ ६ गते, २०७७ - १७:३५ मा प्रकाशित